Noocyada jirka ee ragga: somatotypes iyo sifooyinka | Ragga Stylish
Markaan bilowno marxalad ah inaan kasbano murqaha ama dufan lumino, waxaan xiiseyneynaa inaan wax ka aqrino adduunkan. Waa halkan halka aan ka bilaabayno inaan ku aragno noocyada jirka ee jira oo ku saleysan qaab dhismeedkooda iyo awooddooda. Noocyadaan jirka ah ayaa loo gudbiyaa somatotypes. Waxaa jira dhowr nooc oo somatotypes ah mid walbana wuxuu leeyahay astaamo qofkaas ka dhigaya mid gaar ah. Marka tababarka, qof walba awoodiisa waa in lagu xisaabtamo si tababarka loogu waafajiyo heer kasta iyo ujeeddada.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato noocyada kala duwan ee jirka iyo somatotypes.
1 Noocyada jirka ee ragga
2 Somatotypes: ectomorph
2.1 Wadajirka iyo jimicsiga
2.2 Nidaamka neerfaha iyo dheefshiidka
3 Somatotypes: mesomorphs
4 Somatotypes: endomorphs
Noocyada jirka ee ragga
Haddii aad tahay nin dheer oo dhuuban waxaa jira astaamo qaarkood oo la xiriira itaal darrida ka timaadda tababarka ama qaab muuqaal ahaan aad u daciif ah. Waxaa jira dhowr nooc oo dad ah waxayna kuxirantahay qaab dhismeedka jirka. Noocyada astaamaha ee ka kooban nooc jirka ah waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin somatotype. Somatotypes waxaa loo qaybiyaa saddex: ectomorphs, mesomorphs iyo endomorphs.
Marka ay timaado tababarka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato nooca jirka ee ay tahay inaad la qabsato jimicsiga kartidaada, labadaba qorista muruqyada muruqyada iyo inaad ka nasato jimicsiga.
Waxaan falanqeyneynaa maxay yihiin astaamaha ugu muhiimsan ee ectomorph. Sifooyinka noocan ah jidhku waxay la xidhiidhaan goor dambe oo qaangaadhnimadu bilowdo maaddaama lafuhu dheer yihiin iyo waxay qaadataa waqti ka dheer koriimada noocyada kale ee dastuurrada jir ahaaneed. Miskaha ayaa inta badan ka balaaran garbaha, culeys saa'id ahna wuxuu ku ururi karaa bowdyaha iyo miskaha.
Wadajirka iyo jimicsiga
Kala-goysyada noocan ah jirka waa kuwo wareega. Muruqyada inta badan waa la kordhiyaa dherer ka hor inta aan la ballaarin. Tani waxay kaa dhigeysaa inaad leedahay mug guud oo aad uga yar inta ka hartay somatotypes-ka. Noocyadaas dadka ah waa kuwa cidda loo siinayo Way ku adag tahay inay helaan mug guud oo jirka oo dhan ah iyo inay waqti dheer ku qaataan horumarka qolka jimicsiga. Waxay abuuraan hypertrophy si ka fiican taxanaha marka loo eego isbarbar dhiga. Taasi waa, waa muhiim in la muujiyo tababarka dabiiciga ah iyo plyometrics. Tani waxay ku mahadsan tahay awooddeeda ballaaran ee muruqyada.
Hawlaha jimicsiga ayaa ah kuwa mudnaanta siiya wejiga dabiiciga ah, hoos u dhiga si loo ilaaliyo xiisadda farsamada muddo dheer. Nidaamka wareegga dhiigga ee ectomorphs wuxuu leeyahay cadaadis dhiig oo hooseeya. Qiyaasta garaaca wadnaha ee uu ku nastaa waa mid dhakhso badan oo wareegga dhiiggiisa ayaa daciif ah. Tani waxay u horseedaa vasodilation, sida vasoconstriction oo qunyar socod ah. Waxyaabahani waxay badanaa keenaan gacmo iyo cagaha qabow iyo xitaa nooc ka mid ah vertigo inuu kaco.
Nidaamka neerfaha iyo dheefshiidka
Shakhsiyaadkaan nidaamka dareemayaasha ayaa waxtar badan leh. Waxay u muuqdaan inay si dhakhso leh u falceliyaan waxayna u nugul yahiin noocyo kala duwan oo dhiirrigelin ah. Si kastaba ha noqotee, waxay u nugul yahiin xanuunka waxayna u muuqdaan inay ku dhacaan culeys weyn nidaamka neerfaha. Dheef-shiidka walxahaas ayaa gaabis ah tan iyo markii ay ku nuugaan nafaqooyinka dhib badan. Looma tixgelin karo inay tahay dheef-shiid wax ku ool ah. Waxay u muuqdaan inay leeyihiin heerarka sonkorta dhiigga oo hooseeya sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad cunto shan jeer maalintii si aad uhesho heerarka glycemic ee wanaagsan.
Marka la eego sida jidhka loo istaago, waa in la sheegaa in maaddada cidhiidhiga ah oo cidhiidhi ah awgeed ay yar tahay mindhicirku qol yar. Tani waxay ka dhigeysaa inay caloosha ka weynaato ku dhowaad cunto kasta, haba yaraadee. Tani waxay keentaa qaab-dhismeedyo iyo is-dhexgal. Dhammaan xaqiiqooyinkaas waa in lagu xisaabtamo si loo saxo inta lagu jiro tababarka.
Shakhsiyaadkani waxay abuuraan kabaal dhaadheer inta lagu jiro layli qorista muruqyada muruqyada. Muruqyadoodu waxay u muuqdaan inay ka dheer yihiin inta ay ballaaran yihiin. Tani waxay keenaysaa hagaajinta xoogga inay yaraato oo tartiib tartiib u dhacdo. Waa inaad raacdaa barnaamijyada tababarka kala duwan si aad si fiican ula qabsato hagaajinta. Si la mid ah, haddii ectomorph uu ka baxo tababarka luminta xooggaaga iyo murqahaaga oo noqda kuwo muuqda oo muuqda marka loo eego noocyada kale ee somatotypes.
Waa kuwa loogu magac daray hidde ahaan barakaysan. Waa nooc jir ah oo leh muuqaal ciyaartooy. Waxqabadka muruqyada wareegga dhiigga ayaa wanaagsan maxaa yeelay waxay leeyihiin cadaadis dhiig oo hooseeya iyo bradycardia. Arrinta ugu xun ayaa ah in haddii aad gabowdo, haddii dhaqdhaqaaqa jirka uu yaraado, waxay kordhisaa halista cudurka wadnaha. Tababbarka jimicsiga ee joogtada ah waa lagu talinayaa.
Noocyada shakhsiyaadkan, fiditaanka marinka dhiigga ayaa si dhakhso leh ugu dhaca. Waxay sifiican u taageertaa qabowga ectomorph. Awoodda muruqyada waxay leedahay unugyo isku xiran oo wanaagsan iyo fal-celin fidsan oo xoog leh. Waxay u muuqdaan inay leeyihiin heerar sare oo adrenaline ah iyo muruqyo awood leh. Dheef shiidkiisu wuxuu u kobcayaa si caadi ah oo ka duwan kiiskii hore.
Iyagu waa dadkaas oo haysta dufan badan iyo qaabab wareegsan. Sifada ugu weyn waa tan somatotype ay tahay inay leedahay wareegga dhiigga iyo murqaha oo daciifa. Way ka xoog badan yihiin ectomorph, taas oo horseedaysa in la dhiso qaab dhismeedkooda xoogaa adag laakiin ka dhaqso badan mesomorph.
Waxay leeyihiin isku-darka wanaagsan ee nafaqooyinka leh dheef-shiidka wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, tani waxay fududeyneysaa miisaanka. Sidaa darteed, cuntadaadu waa inay kujirtaa cunnooyinka ka tamar-yar kuwa kale ee somatotypes si loo ilaaliyo dheelitirka ugufiican ee u dhexeeya xoogga iyo culeyska. Awooddooda nasashada ayaa ah mid aad u wanaagsan waxayna u muuqdaan kuwo aan u nugul xanuunka. Si kastaba ha noqotee, dhammaan shaqooyinkeeda waxay u kobcaan si tartiib tartiib ah. Waxay u muuqdaan inay leeyihiin garaaca wadnaha oo gaabis ah, cadaadis dhiig oo hooseeya, iyo qaangaadhnimo dib u dhac ah. Badanaa waa dad aan fadhiyin oo miisaankoodu sarreeyo ama cayilan.
Sababtoo ah waxay leeyihiin dhibaatooyin waaweyn ilaalinta miisaanka jirka haddii ay dhacdo dhaawac, waxaa lagama maarmaan u ah inay helaan nolol ku filan iyo tababar iska caabin ah oo aad u daran.
Sidaad aragto, noocyada kaladuwan ee jirka ayaa wax uqabta somatotypes mid walbana waa inuu tixgeliyaa dhinacyada ugu muhiimsan. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto somatotypes iyo noocyada jirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Noocyada jirka: somatotypes
Cuntooyinka hodanka ku ah fitamiin E